Banaan baxyo loogaga soo horjeedo Maraykanka oo ka socda dalal badan oo Islaam ah - iftineducation.com
iftineducation.com – Boqolaal banaanbaxyaal ah oo ka soo horjeeda film aflagaao loogu geystey Islaamka oo lagu sameeyey Maraykanka ayaa weeraray dhismaha safaarada Maraykanka ee magaalada Sanca ee dalka Yemen.
Booliska ayaa rasaaska cirka u riday si ugaga horjoogsadaan dadka banaanbaxayay balse dadkii ku xoomay safaarada ay dab qabadsiiyey gaadiid yiil gudaha safaarada.
Wararka ayaa sheegaya in qaar kamid ah dadkii banaanbaxyay ay dhaawacmeen.Talaadadii ayaa safiirkii Maraykanka ee dalka Libya waxaa lagu diley qunsuliyada uu Maraykanka ku leeyahay magaalada Benghazi ee dalka Libya.
Waxana la sheegay in maraakiib dagaal ay u direen dowlada Maraykanka dalka Libya. Saddex kamid ah shaqaalihii safiirka J Christopher Stevens ayaa sidoo kale ku dhintey weerarkii lagu qaaday qunsuliyada Libya hase ahaatee safiirka ayaa la rumeysan yahay inuu u dhintey qiiq ka baxayay dhismihii safaarada ee la gubay.
Banaanbaxyo kale ayaa waxa ay ka dhacayaan wadamo kale sida dalka Masar,Ciraaq,Marocco iyo wadamo kale.
Banaanbaxyadan ayaa laga cabsi qabaa inay ku sii fidaan wadamo kale oo Islaam ah. Waxana la sheegayaa in ninkii sameeyey filimka lagu aflagaadeeyey Islaamka inuu ku sugan yahay dalka Maraykanka ayna ciidamada Marayknanka bilaabeen in ay ilaaliyaan isaga iyo qoyskiisa kadib markii ay soo wajahday cabsi xoog leh.
Guud ahaan ammaanka safaaradaha dalka Maraykanka uu ku leeyahay wadamada Caalamka ayaa la adkeeyey iyadoo laga cabsi qabo inay saameyn ku yeeshaan banaanbaxyada loogaga soo horjeedo Maraykanka.